News Archives - Page2of9- Enepali Online
काठमाडौं । अन्ततः नेपाल चीनसँगको इन्टरनेट सञ्जालमा जोडिएको छ । नेपाल टेलिकम चीनसँगको क्रस बोर्डर अप्टिकल फाइबर लिंकसँग जोडिएसँगै नेपालमा भारतीय इन्टरनेट एकाधिकार तोडिएको छ । इन्टरनेटमा जोडिने भाका पटक-पटक भाका सार्दै आएको नेपाल टेलिकमले अन्ततः चीनसँगको अन्तरदेशीय इन्टरनेट लिंकको सफल परीक्षण गरेको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत रं नेपालका लागि चिनिया राजदुत यु होङले संयुक्तरुपमा शुक्रबार यो नेटवर्कको औपचारिक उद्घाटन गर्नेछन् । केही हप्ता भएको परीक्षण सञ्चालन सफल भएपछि व्यवसायिक रुपाम…
"आयो ३ करोड नेपाली जनतालाई खुसीको खबर: चीनको इन्टरनेट सञ्जालमा जोडियो नेपाल, तोडियो भारतीय एकाधिकार !"
भारत तर्फ लग्दै गरेको अवस्थामा नेपाल प्रहरी जुम्लाले २० जना बालकहरुको उद्धार गर्न सफल भएको छ। जुम्लाबाट नेपालगंजतर्फ जाँदै गरेको ना.५ ख ४५२९ नम्बरको यात्रुवाहक बसमा ८ देखि १५ बर्ष उमेर समूहका २० जना बालकलाई भारततर्फ लैजान लागेको अवस्थामा दुई जनालाई प्रहरीले पक्राउ समेत गरेको छ। उद्धार गरिएका २० जना बालकहरुलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाको महिला सेलमा राखिएको छ । राठी गाउँपालिका–३ छुमचौर बस्ने ३२ बर्षीय कर्म तामाङ र २९ बर्षीय छिरिङ तामाङलाई मंगलबार प्रहरीले…
"२० जना बालकलाई भारत लग्दै गरेको अवस्थामा पक्राउ !"
काठमाडौं । सहज स्वास्थ्य सेवा लगायत विभिन्न माग राख्दै आन्दोलनरत डा. गोविन्द केसीको पक्षमा हजारौं मानिस सडकमा ओर्लिरहँदा युनिभर्सल मेडिकल कलेजका मालिक खुमा अर्यालले भने आतंककारीको संज्ञा दिएका छन् ।मेडिकल कलेज संचालन गर्दैआएका व्यावसायी अर्यालले डा. केसीको आन्दोलनको विरोध गर्दै ट्वीटमार्फत यस्तो बताएका हुन् । उनले आफ्नो ट्वीटमा लेखेका छन्, ‘३ करोड नेपाली जनताको नाममा उनी आतंककारी हुन् ।’ उनले ‘टेरोरिस्ट’ शब्द प्रयोग गर्दै डा. केसीविरुद्ध आक्रोश पोखेका हुन् ।अर्यालको यस्तो ट्वीट सार्वजनिक भएपछि डा.…
"यी मानिस जसले डाक्टर केसीलाई आतंककारी भने..आखिर को हुन् यी मानिस?? पूरा पढ्नुहोस्"
काठमाण्डु, २६ पुस– गत असोजमा एमाले, माओवादी र केही साना दलले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनलाई लक्षित गरी बाम गठबन्धन निर्माण गरेसँगै त्यसलाई तोड्न हरतरहको प्रयास गरेको दक्षिण छिमेकी भारतले अझै चलखेल जारी राखेको छ । निर्वाचनमा बाम गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत ल्याएपछि गठबन्धन टुटाउने उसले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आगामी पाँच वर्षका लागि प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेको थियो । भारतीय जनता पार्टी भाजपाका नेता राम माधव निर्वाचनलगत्तै नेपाल आए । उनले बाम गठबन्धन र काँग्रेस…
"दिल्लीमा बन्यो एमाले फुटाउने प्लान, माओवादीमा पनि चिरा पार्ने रणनीति"